के मैले क्लाउड क्याम्पमा सिके | Martech Zone
बिहीबार, फेब्रुअरी 5, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यद्यपि पछिल्लो हप्ता हिउँका कारण ढिलाइ भयो (१ हप्ता), क्लाउड क्याम्प इंडियानापोलिस आज रात कुनै हिचकिचाहट बिना गयो। यदि तपाईं हुनुहुन्छ छैन इन्डियानापोलिस बाट - तपाईले पढिरहनु पर्छ। क्लाउड क्याम्प अपेक्षाकृत नया हो र विश्व भर मा प्रमुख शहरहरु मा आयोजित गरीन्छ। विषय को विशेषज्ञता र उद्योग नेतृत्व को धन्यवाद BlueLock, हामी यहाँ इन्डीमा एक सफल कार्यक्रम आयोजना गर्‍यौं।
यदि तपाईं सोचिरहनु भएको छ भने क्लाउड कम्प्युटि। भनेको के हो, ब्लुलोकले बरु यो नब्लोस शब्द परिभाषित गर्न केही छलफल प्रदान गरेको छ।
इंडियानापोलिसमा क्लाउड कम्प्युटि??
इन्डियानापोलिसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तवरले ध्यान खिचेको छ किनभने कम र स्थिर लागत शक्ति र रियल ईस्टेटसँग सम्बन्धित छ - होस्टिंग लागत निर्धारणमा दुई विशाल कारकहरू। थप रूपमा, हाम्रो मौसम ठोस छ र हामी उत्तर अमेरिकामा इन्टरनेटको प्रमुख बैकोनहरू बीचमा एउटा चौराहा छौं। यदि तपाईं अहिले क्यालिफोर्निया डाटा गोदाममा आफ्नो आवेदन होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने - तपाईं एक झलक हेर्न सक्नुहुन्छ!
क्लाउड कम्प्युटि inमा ब्लूलोक एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेता हो
म इमान्दार हुनुपर्दछ, अधिक म प्याट ओ डे बोल्ने सुन्छु, त्यस व्यक्तिलाई क्लाउड कम्प्युटि,, युटिलिटी कम्प्युटिंग, ग्रिड कम्प्युटिंग, डाटा गोदाम व्यवस्थापन, वर्चुअलाइजेशन, VMWare ... को बारे तपाईले कत्ति धेरै जान्नुहुन्छ भन्ने बारेमा बढी डराउनु पर्छ यो। उहाँ नरम बोली, कृपालु, र हामीसँग बोल्न सक्ने अलौकिक क्षमता छ कि उद्योग मा टेक प्रेमी छैन!
म समुहमा अरूलाई छुट दिदैँन! जोन क्वालहरू र ब्रायन वोल्फ महान साथीहरू हुन् तर आज रात प्याट सुर्खाहरूमा थिए।
ब्रेकआउट सेसनहरू: अनुप्रयोग स्केलेबिलिटी
मैले भाग गरेको सत्र मध्ये एक एड साइपेचको नेतृत्वमा थियो। एडले इन्डियानापोलिस स्टारमा काम गरे जब मैले गरे र अखबारमा धेरै स्केलेबिलिटी र अनुप्रयोगहरू निर्माण गरें। त्यस समयमा उसले केहि जादू फिर्कायो - थोरै स्रोतहरू थिए र धेरै मागहरू रेजर पातलो बजेटमा उद्यम अनुप्रयोगहरू निर्माण गर्न।
एडले नयाँ उपकरणहरू बारे एक टन साझा गर्नुभयो जुन स्वचालित लोड टेस्टिंग र अनुप्रयोग गति परीक्षणको साथसाथै वास्तुकलाको स्वस्थ छलफलको लागि र यसको अर्थ ठाडो रूपमा बढेको र तेर्सो रूपमा स्केलि .्गको मतलब के हो। मलाई कुराकानीबाट रमाईलो लाग्यो।
शेयरिंग वास्तवमा एक प्राविधिक शब्द हो?
[बीभिस र बटहेड हाँस्नुहोस्]
हामीले छलफल पनि गरेका थियौं शार्डि।, एक शब्द जुन मैले केवल बाथरूम हास्यको लागि आरक्षित गरेको थिएँ जुन मैले एक पटक एक चलचित्रमा देखेको थिएँ। Sharding वास्तवमा तपाईको अनुप्रयोग स्केलि of्गको माध्यम हो, बर्बरताका साथ, केवल नयाँ डाटाबेस प्रतिलिपिहरू सिर्जना गरेर र ग्राहकहरूलाई विभिन्न डाटाबेसहरूमा धकेल्नाले एकल डाटाबेसमा सबै पटक हिर्काउने पीडा कम गर्न।
ब्रेकआउट सत्र: क्लाउड आरओआई
क्लाउड कम्प्युटिंगसँग सम्बन्धित लागतहरू बिभिन्न भिन्न हुन सक्दछन् - वस्तुतः केही देखि प्रणालीमा जुन अत्यधिक निगरानी र कडा सुरक्षा गरिएको छ। ब्लूलोकको स्वाद एक सेवाको रूपमा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो - जहाँ तपाईं मूल रूपमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको सबै टाउको दुबैलाई उनीहरूको टोलीमा आउटसोर्स गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईं परिनियोजन र वृद्धिमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ!
म रिटर्न अन इनभेस्टमेन्ट कुराकानीमा गएँ भनेर सोचिरह्यौं कि हामीसँग परम्परागत बनाम क्लाउड होस्टिंगका लागि आवश्यक संसाधनहरूको विश्लेषणमा धेरै गहन पाठ हुनेछौं। सट्टा, रबी स्लटर दुबै पक्षका विपक्षहरूको उल्लेखनीय छलफलको नेतृत्व गरे र जोखिम न्यूनीकरणको बारेमा कुरा गरे।
जोखिम एक नम्बर हो जुन प्राय जसो कम्पनीहरूले केही नम्बरहरू राख्न सक्दछन् ... यसको कति खर्च हुन्छ यदि तपाईं तत्काल बढ्न सक्नुहुन्न? यदि तपाईं तल जानु भयो र फिर्ता बहाल वातावरण ल्याउनु पर्छ भने यसको कति खर्च हुन्छ? यी लागतहरू, वा हराएको राजस्व, परम्परागत तुलनामा विश्लेषण गरिएको निक र डाईमहरूलाई ओझेलमा पर्न सक्छ।
एक विशेष आश्चर्यजनक होस्ट गरिएको घटनाको लागि ब्लूलोकलाई विशेष धन्यवाद (पन इरादा गरिएको)। म घर आउन र शार्डि aboutको बारेमा ब्लग गर्न पर्खिन सक्दिन
टैग: बादलक्लाउड कम्प्युटिङक्लाउड क्याम्प
"हामीले शार्डि discussedको बारेमा पनि चर्चा गर्यौं जुन एक शब्द हो जुन मैले केवल बाथरूमको हास्यको लागि मात्र आरक्षित गरेको थिएँ जुन मैले एक पटक फिल्ममा देखेको थिएँ।"
म असाध्यै हाँसेँ, म थोडा शार्डे भएँ।
फेरी, [बीभिस र बटहेड हाँस्नुहोस्]
प्लग को लागी धन्यवाद, डग! क्लाउड क्याम्प एक ठूलो घटना थियो।
म शार्डिंगको बारेमा एडको कुराकानीमा थिइनँ, तर मैले सोचें कि म स्पष्ट पार्छु कि यो दृष्टिकोण "बर्बर" छैन। सामान्यतया, शार्डिले तपाईंको डाटाबेस बिच्छेदन निर्दिष्ट गर्दछ अनुप्रयोग विशेष फॉल्ट लाइनहरूको साथ। उदाहरण को लागी, यदि एक ग्राहक बाट डाटा को लागी अर्को ग्राहक बाट डाटा असर गर्दैन, तपाईं आफ्नो मुख्य डाटाबेस दुई भागहरु मा विभाजित गर्न सक्नुहुनेछ: AL र MZ।
स्टोरेज केटाहरूमा (जस्तै एड) यो एक क्रूड समाधानको प्रकार हो, किनकि यसको मतलब तपाईले बहु डाटाबेसहरू राख्नु पर्छ जुन प्रभावी ढ effectively्गले संरचना भएको छ। तर अधिक लागत थप नगरी यो कार्य वृद्धि गर्ने एक उत्तम तरिका हो!
फेब्रुअरी १,, २०११ 5:१:2009 अपराह्न
क्रूड एक राम्रो शब्द हुन सक्छ, रब्बी। ठूलो स्पष्टीकरण - यो एक व्यावहारिक समाधान हो, केही क्रुर बलको एक केहि।
"चोट बल" सही छ। तर तपाइँलाई यो पुरानो भनाइ थाहा छ: "यदि क्रूर शक्तिले काम गर्दैन भने, हुनसक्छ तपाई पर्याप्त प्रयोग गरिरहनु भएको छैन!"